Adiga Maaha Adiga ... | Martech Zone
Adiga maahan adiga…
Talaado, July 5, 2011 Monday, June 24, 2013 Douglas Karr
Agagaarka waxaa ku yaal makhaayad Thai ah oo shaqo cajiib ah ka qabta dhowr suxuun. Mid ka mid ah kuwa ugu cadcad waa Red Curry. Saxanka waxaa ka buuxa khudradda Thai runti waa basbaas. Uma maleynayo inay tahay mid ka mid ah cuntadooda ugu caansan… Pad Thai iyo Pineapple Fried Rice waxay umuuqdaan inay u iibinayaan sidii waali.
Weligey ma arag mid ka mid ah asxaabteyda oo amraya Red Curry… waana ogahay in qoyskeygu aysan u qadarin sidaan aniga oo kale. Ma bixinayo wax maskax ah, in kastoo. Dhamaanteen waxaynu leenahay dhadhan kala duwan. Heck, asxaabteyda badankood xitaa ima raaci doonaan maqaayada food Cuntada Thai aad ayey uga duwan tahay iyaga xitaa inay tijaabiyaan.
Marka… haddii aan furayo makhaayad, malaha ma ahaanayso maqaayada Red Curry. Xaqiiqdii, waan tijaabin karaa saxanka si aan u arko haddii qof jecel yahay, laakiin haddii aan doonayo in maqaayada laga dhigo mid caan ah, waxaan ku dari doonaa alaab menu soo jiidata macaamiisha. Fikradayda runtii wax macno ah ma leh maadaama aanan aheyn wakiilka.
Makhaayadaha waaweyn dhagayso macaamiishooda. Waxay hayaan taarikada caanka ah, waxay tijaabiyaan suxuunta cusub, waxayna baabi'iyaan cuntada aan cidina cunayn.
Maxay tan ku leedahay suuqgeynta? Waa hagaag, waa sheeko la mid ah inay tahay hay'ad. Waxaan haynaa qaar macaamiil ah oo jecel boggooda, jecel waxyaabaha ay ka kooban yihiin, jecel sawiradooda… haddana wax ganacsi ah kama helayaan goobta. Waxaan sidoo kale soo saarnay wax yar oo macluumaad ah oo loogu talagalay shirkadaha aan waligood iftiimin, inkasta oo ay labaduba qurux badan yihiin isla markaana ay macluumaad badan leeyihiin. Sababta Sababtoo ah macmiilku ma jecla iyaga… ama ma jecla wax iyaga ku saabsan.
Markaan maqlo macmiil i dhaha, “Ma jecli!”, Waa waxoogaa niyad jab ah. Xaqiiqdii, waxaa jira dhinac ka mid ah qanacsanaanta macmiilka oo ah inaan la kulanno… laakiin markii suuq-geyntaada soo-galeyntu aysan soo saarin wax horseed ah, miyaad runti sii wadi doontaa inaad ku tiirsanaato fikradahaaga? Uma maleynayo sidaas, marka waxaan u sheegayaa sida ay tahay But “Laakiin maahan waayo, adiga. ”
Adigana waan ku odhan doonaa Websaydhkaagu waa adiga maahan. Bloggaagu waa adiga maahan. Macluumaadkaaga ayaa ah adiga maahan. Boggaaga degitaanku waa adiga maahan. Xayeysiintaadu waa adiga maahan. Adigu ma iibsanaysid gabal farshaxan ah oo aad ku dhejineyso xafiiskaaga. Websaydhkaaga ayaa marin u ah booqdayaasha si ay u ogaadaan alaabadaada iyo adeegyadaada taasna waxay u horseedaysaa… laga soo bilaabo rajada ilaa macaamiisha.
Haddii aad rabto inaad hagaajiso suuqgeyntaada gudaha iyo inaad si buuxda uga faa'iideysato warbaahinta internetka, waa inaad bilowdaa inaad horumariso xeeladahaaga macmiil maskaxda ku haya. Maxaa iyaga soo jiita? Maxaa ka dhigi doona inay gujiyaan? Maxaa soo saari doona tilmaamo dheeraad ah? Ra'yigaaga kuma sii fogaan doono suuqgeynta internetka. Tijaabinta iyo dhageysiga martidaada ayaa, inkasta oo. Xusuusnow…
Baraha Bulshada - Iskuxirka Farqiga
My Facebook Isticmaalka Rant
Jul 6, 2011 markay ahayd 10:31 AM
Waxaan rabaa inaan dhigo nuqul ka mid ah qoraalkan blog-ka ah dalab kasta oo aan qorno. Kooxda naqshadeynta, goor dhow ama goor dambe waxaan ka maqleynaa ereyadaas macaamil, waana wax laga xumaado markaan ogaanno inaan garaacnay calaamadda.
Jul 6, 2011 markay tahay 1:25 PM
GOST POST. Waxaan u maleynayaa mararka qaar inaan aad ugu faraxsanahay inaan sameyno mashruuc aan ka sameysan karno nafteena, taas oo ah tan ka soo horjeedka saxda ah ee ay tahay inaan sameyno. Waxaan qoray qoraal isku mid ah oo ku saabsan tan qiyaastii 2 toddobaad ka hor. Waxay leedahay fariin weyn oo ku socota taas oo aan dhamaanteen u baahanahay inaan maqalno marar badan stuff Waxyaabo waaweyn!